Qormada Iibinta ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Qormooyinka ugu Wanaagsan ee Iibinta ee Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Haddii aad rabto inaad hesho 100% waraaqaha asalka ah ee qiimaha la awoodi karo, ka dib noogu tiirsan. Waxaa la joogaa waqtigii lagu kobcin lahaa guushaada tacliimeed ee adeegga qorista maqaalka ee mudnaanta leh Somalia
Dad badan oo raadinaya inay dakhli dheeraad ah ka helaan guriga waxay raadinayaan qormooyin iib ah mana niyad jabaan. Tani way fiicantahay maxaa yeelay waxay heli doonaan ilo dakhli kab ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso inaad u adeegsato qormooyinka hab aad ku kasban karto lacag dheeri ah waxaa muhiim ah inaad raacdo talooyin dhowr ah.
Qoraallada iibka ah waa kuwo hami badan leh waxayna u baahan yihiin macluumaad badan. Tani way fiicantahay. Ma heli doontid qormo tayo yar oo u qoran qiimo ka sii hooseeya, mana heli doontid wax ka jaban.
Laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso haddii qormooyinkan hore loo qoray ee loogu talagalay adeegyada iibku ay yihiin kuwo kuu qalma waqtigaaga? Haddii aad go'aansato inaad iibsato ururinta, waa inaad hubisaa inay bixiso sharraxaad sax ah ee waxa qoraagu isku dayayo inuu gudbiyo. Haddii kale waxaa laga yaabaa inaad waqtigaaga ku lumiso qormo iib ah oo aan u dhigmin xitaa shakhsiyaddaada.
Sida wax kasta oo kale oo aad qortid aad ayey muhiim u tahay inaad baaris ku sameyso oo aad aqriso qoraalada dadka kale ka hor intaadan ku sameyn maadadaada. Waxa jira buugaag iyo koorsooyin badan oo kaa caawin kara inaad fahamto nooca qormada ay tahay inaad qorto iyo sida loo qoro. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa in koorsooyinkan iyo buugaagtani ay kaa caawin karaan inaad ku fiicnaato isticmaalka ereyga qoran. Waa inaad ka faa'iideysataa tan.
Sidoo kale waa inaad hubisaa inaadan kaliya koobiyeynin shaqada qof kale maxaa yeelay tani waxay noqon kartaa tuuganimo. Hubso inaadan sameynaynin khayaano oo waa inaad sidaas sameysaa kaliya haddii aad runti ogtahay waxaad sameyneyso.
Waxa xiga ee ay tahay inaad ka fiirsato ayaa ah haddii aad qori doontid qormooyin iib ah hubi inaad bixiso tusaalooyin wanaagsan. Tani had iyo jeer maahan waxa ugu fudud ee la sameeyo maxaa yeelay macluumaadka badanaa waa kuwo faahfaahsan oo waxaad wax ka qoreysaa wax aadan gebi ahaanba hubin. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira siyaabo lagu hubiyo in qoraalkaaga uu noqon karo mid la akhrin karo.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo in qoraalkaagu yahay mid wargelin leh oo dhameystiran ayaa ah inaad hubiso inaad sameyso cilmi baarista ka hor intaadan bilaabin. Raadi buugag yar iyo maqaallo kala duwan si aad fikrado ugu muujiso qoraalkaaga. qoraalkaaga.
Tan macnaheedu maahan in fikradaha aysan aheyn kuwa wanaagsan, laakiin waa inay noqdaan wax ku saleysan macluumaad adag oo kaa caawin doona inaad fahanto. in aad gaarto go'aano aqoon leh.
Waa inaad had iyo jeer hubisaa in qoraaladaada iibku ay yihiin kuwo si sahlan loo akhriyi karo. Haddii aad isku dayeyso inaad wax iibiso, hubi in qoraalkaagu macno samaynayo oo ay fududahay in la fahmo.
Sidoo kale waa inaad hubisaa in qormadu leedahay naxwaha iyo higgaadda wanaagsan. Naxwaha iyo higgaadinta ayaa laga yaabaa inay yihiin labada khalad ee ugu waawayn ee dadku sameeyaan markay qorayaan qormooyinka iibka ah. Haddii aadan hubin in qoraaladaada iibku ay yihiin kuwo aan cillad lahayn markaa waxay si liidata uga tarjumi doonaan dabeecadaada.
Sidoo kale waa inaad hubisaa inaad haysato cilmi baaris fara badan oo aad ku kaydsan karto wax kasta oo aad ku tiraahdo qoraalkaaga. Tani badanaa marar ayey dhacdaa in dadku qortaan sheeko iib ah ka dibna aan waligood ku mashquulin inay dib u akhriyaan. Waa qalad aad u weyn. Way kafiican tahay inaad ka nabad gasho intaad ka qoomamaynayso qormo iib ah.
Ugu dambeyntiina, waa inaad hubisaa inaad curintaada u siisay cinwaan macno samaynaya. Haddii aad leedahay cinwaan xiiso leh waa inaad u isticmaashaa si aad u sharaxdo mawduuca aad rabto inaad daboosho.
Marka la soo koobo, hubi inaad raacdo tilmaamahan iyo taladan si aad u hubiso in qoraaladaada iibku ay yihiin kuwo xog iyo akhrin kara. Waa inay lahaadaan naxwaha iyo higgaadda wanaagsan. Waa inay ahaadaan kuwo si fudud loo akhriyi karo oo ay noqon karaan kuwo si fudud loo fahmi karo.
© Copyright 2020 EssayTogethersomalia.online. All right reserved.
Si looga dhigo boggan mid adiga kugu habboon EssayTogethersomalia.online isticmaalaa buskudka. Akhriso kaayaga siyaasadda cookie.